Onye bụ papa gị? - Lovemụ nwoke Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Onye bụ papa gị? nkezi 4.3 / 5 si 23
NA / A, o nwere ihe nlere 40.6K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, na-atọ ọchị, Drama, fantasy, Akụkọ ihe mere eme, Mystery, Otu gbara, Ọkà mmụta, romance, Smut, Yaoi
Louis, onye isi nke ndị isi nke ndị nche nke abụọ, na-achọpụta na ọ bụ "n'ọnwa nke anọ nke afọ ime" ka ọ na-achụ onye na-egbu egbu nke na-agba agba na isi obodo ahụ. Ọnwa anọ gara aga, abalị a na-agaghị echefu echefu na bọọlụ obí… didnye ka ya na ya nọrọ?
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ nwata love anime
Chapter 11 Nwere ike 3, 2021
Chapter 10 Nwere ike 3, 2021
Mgbe kpakpando ahụ hiri ụra
Ntụ ntụ Snow Melancholy
Enweghi ngwụcha Sky